Izindaba zeStaba Motor
Isayensi Yezimoto 丨 Ukuqonda ama-algorithm we-BLDC Motor Control
Isayensi Yezimoto 丨 Ukuqonda iBLDC Motor Control Algorithms Isingeniso: Abathengi badinga izinto zabo zasendlini, amathuluzi engadi kanye nemikhiqizo eqhutshwa yimoto ukuthi ibe namandla kakhulu, ibe ncanyana ngosayizi futhi isebenze kahle. Njengemikhiqizo eminingi ye-elektroniki yabathengi, abathengi nabo balindele lokhu ...
Indlela Elula Nesheshayo Yokwahlulela Ukuthi Imoto ye-BLDC yinhle yini noma yimbi
Indlela Elula Nesheshayo Yokwahlulela Ukuthi Imoto ye-BLDC yinhle yini noma ayilungile A. Sebenzisa Ithebula Lokunyakazisa Isilinganisi sokuqinisa silinganisa ukumelana kokuqina phakathi kwama-windings ezigaba ezintathu zenjini (i-voltage elinganisiwe engu-380V) nokumelana nomhlabathi phansi ( eya ku-chassis). Res ukwahlukanisa ...
Umehluko phakathi kwamavelu wemikhawulo yokusebenza kahle kwamandla ngemuva kokuqaliswa kwe-New China National Standard for Motors ngemuva kukaJuni 1 2021
ngomphathi ku 21-05-01
Umehluko phakathi kwamavelu wemikhawulo yokusebenza kahle kwamandla ngemuva kokuqaliswa kwe-New China National Standard for Motors ngemuva kukaJuni 1, 2021 Uhlelo lwakamuva lwamazinga kazwelonke ayimpoqo e-GB 18613-2020 “Value Limited and Energy Efficiency Grades of Electric Motors ...
Ulwazi Oluyisisekelo Lokuhlolwa Kwezimoto
Ulwazi Oluyisisekelo Lokuhlolwa Kwezimoto 1. Ungakwenza kanjani isivivinyo se-BLDC Motor No-load Test? Ngaphambi kokuhlolwa, hlola i-BLDC Motor. Ngemuva kokuthi kungabi nankinga, xhuma ukunikezwa kwamandla wezigaba ezintathu ukwenza imoto idling ngaphandle kokuhudula umthwalo. Ngemuva kwalokho hlola umsindo osebenzayo, ophethe ukusebenza kanye ne-curr yesigaba ezintathu ...
Okwedlule, Okwamanje Nekusasa lamaPermanent Magnet Motors?
Okwedlule, Okwamanje Nekusasa lamaPermanent Magnet Motors? Kulezi zinsuku, imakethe yezimoto igcwala ama-motor kazibuthe waphakade. Kujwayelekile ukuthi izinga lokukhula kwamagnetic brushless motors angaphezulu kwe-100%, hhayi nje inhlanhla. Izinga lokukhula kwama-magnet motors unomphela lizoqhubeka isikhathi eside ...
Izizathu Nezixazululo Zokushisa Okushisa Kakhulu Okuphezulu Kwezimoto
Izizathu Nezixazululo Zokuhlaziywa Kokushisa Okushisa Ngezimoto Okuphakeme Kakhulu Kwembangela Yokwehluleka: 1. Amandla kagesi aphakeme kakhulu, okwandisa kakhulu ukushisa komgogodla wensimbi; 2. Amandla kagesi aphansi kakhulu, imoto isebenza ngomthwalo olinganisiwe, ne-curren ...
Isimiso sokuvikelwa kanye nokusebenza kwe-BLD Motor Operation
Ukuvikelwa Kokugcwala Kakhulu Lapho imoto ye-bldc inephutha lokugcwala ngokweqile futhi idlula isilinganiso sayo esilinganisiwe isikhathi eside, izodala ukuthi imoto ye-bldc ishise ngokweqile, inciphise ukwahlukanisa futhi ishe. Umvikeli ubala umthamo wokushisa wemoto ye-bldc ngokuya ngezici zokushisa ze-th ...
Ifomula Yokubala kanye Nendlela Yezimoto Zikagesi
Ifomula Yokubala kanye Nendlela Yezimoto Zikagesi 1. Ukubalwa kwezimoto njengamanje: Okokuhlinzekwa kwamandla kagesi wezigaba ezintathu, i-voltage yelayini ngu-380, i-voltage yesigaba ingu-220, bese kuthi i-voltage yomugqa iyimpande yamandla esigaba sesi-3 Yemoto , i-voltage ye-winding yi-phase phase, ne-voltag ...
Ubuhle nobubi bamaBrushless Motors
Okuhle nokubi kwe-Brushless Motors Inzuzo ye-Brushless Motors: (1) Alikho ibhulashi, ukuphazamiseka okuphansi I-brushless motor isusa ibhulashi, futhi ushintsho oluqonde kakhulu ukuthi ayikho inhlansi kagesi eyenziwe lapho imoto yebhulashi isebenza, okunciphisa kakhulu ukuphazamiseka kwe ...
Izici ze-High Efficiency Motor
1. Ingonga amandla futhi inciphise izindleko zokusebenza zesikhathi eside, ezilungele kakhulu indwangu, ifeni, ipompo lamanzi ne-compressor; 2. I-motor asynchronous ingashintshwa ngokuphelele ngokuqala ngqo noma ngokulungisa ijubane ngesiguquli semvamisa; 3. Imiphumela ikhombisa ukuthi umhlaba onqabile unomphela ...
Izimbangela eziyishumi ezinkulu zeMoto Vibration, ukuseshwa nokulungiswa kuncike kulezi zimo ezithile
ngomphathi ku 20-01-07
Kunezizathu eziningi zokuVibration Kwezimoto, futhi futhi ziyinkimbinkimbi kakhulu. Ama-Motors anenani elikhulu lezigxobo ezingaphezulu kwezigxobo eziyi-8 ngeke adale ukudlidlizela ngenxa yezinkinga zekhwalithi ekukhiqizeni izimoto. Ukudlidliza kuvamile kuma-pole pole ama-2-6. I-GB10068-2000 “Izungezisa Imoto Yokudlidliza Imoto ...
Ukuvimbela imoto kuvimbela ukuxhuma kwama-windings nokufaka umhlaba. Lapho ubheka ama-motors, kubalulekile ukuqonda ukuthi ukusebenza kwe-insulation kusebenza kanjani nokuthi kusebenza kanjani. Okuqukethwe 1. Isilinganiso IEC - NEMA Temperature Rise Insulation Life and Temperature 2. Testing Insula ...
Uma unanoma yimiphi imibuzo, imibuzo noma izincomo, sicela ushayele: 0086-137 9445 5099 noma ugcwalise ifomu elilandelayo
Isilawuli se-BLDC se-Power Drill, Isilawuli se-BLDC se-Hair Dryer, Isilawuli Sezimoto se-BLDC se-Hair Dryer, Isilawuli se-FOC BLDC se-Power Drill, Isilawuli Sezimoto se-BLDC se-Power Drill, I-FOC BLDC Isilawuli Sezimoto se-Power Drill, nophenyo pricelist
INOMBOLO:0086-137 9445 5099